Talooyin Muhiim Ah Oo Aragtidaada Wax Kabadali Doona. W/Q: Maxamed Cabdi Jaamac
Wednesday June, 20 2018 - 00:44:27
Monday February 22, 2016 - 10:11:18 in by salman abdi
Ugu'horrayn waxaa dhammaanteen nagu waajib ah in aan noqon ummad xarigga alle si toos ah u haysata oo
wixii laga reebayna ka harta wixii la farayna la timaada waa hadii aan doonayno in aan ahaano ( noqono) ummad karaamo iyo sharafba hesha.
Waxaa kaloo aad u muhiim ah qofku inuu ahaado qof akhyaar ah .
Akhyaarnimadu waa in qofku uu la yimaado habdhaqan wanaagsan oo daacad ah ( aan ahayn mid la iska yeel yeelo) , habdhaqanka wanaagsan waxa uu noqon karaa wax waliba oo aan ka hor imaanayn diinta islaamka.
Habdhaqanka wanaagsan waa midka kaa dhigaya qof dadka oo idil ay xushmad u hayaan xitaa adigoowaxba u qaban.
waxaana kamid ah
1 . Waa in aad noqotaa qof Aamin ah :
# Hadii aan laba qodob oo muhiim ah ku soo koobo qofka aaminka ah waxa ay noqonayaan sidan
A – Waa in aad ahaataa ruux wixii looga tagto iyo hadalkii lagu qarsado midna aan ku xad gudbayn.
1- Waa in aad amaanada dhowrtaa oo adan ku xad gudbin ,
2- Hadii lagugu qarsado arin sir ah ( wax qaas ah ) waa in aadan faafin sirtaa.
B – Waa in aadan dhib u gaysan dadka Naftooda, Hantidooda iyo Shaftoodaba .
¤- waa in laga nabad galo gacantaada oo aadan dhibaatayn dadka naftood ( jirkooda) .
¤- waa in aadan xoolaha dadka ku qaadan xatooyo ama xoog .
¤- Waa in aadan dhaawicin sharafta dadka hadeey ahaan lahayn in aad aflagaadeeyso ayaga oo kula jooga amaba in aad ku xamato hadal xun ayaga oo kaa maqan.
2- Waa in aad noqotaa qod Daacad ah .
” Daacadnimadu waa in qofku Run ku hadlaa Runa ku dhaqmaa si Run ahna u fikiraa ”
# Hadii aan Tusaalooyin gaagaaban soo qaato waxaa kamid ah :
¤ – Marki aad dadka wax u sheegaysid waa in aadan been u sheegin beena ka sheegin.
¤ -Hadii khalad uu kaa dhaco waa in aad runta ka sheegtaa wixi aad sameeysay waa in aadan isku dayin cid kale in aad dusha ka saarto dambigi aad gashay, waayo qofka oo dambigiisa qirtaa waa geesinimo , inta badana waxaa dhacda qofku in uu iska’ kaa cafiyo marki aad usheegto khaladki kaa dhacay hadiisi aad ka qariso oo uu dib ka ogaado waa wax foolxun sumcadaadana dhawici karta ee ka taxadar.
¤- Hadii lagaa waraysto xaalad aad goobjoog ahayd waa in aad sidaad u aragtay u sheegtaa oo aadan isku dayin in aad wax ka qariso amaba in aad wax ku darto adigoo isleh qurxi ama buunbuuni.
¤ – Waxaa wanaagsan dadka in aadan ku dhex faafin amaba aadan ku dhiiri galinin wax aadan doonayn in aad adiguba samayso . In aad wanaag u sheegto adigana aadan samaynayn amaba in aad ka waaniso xumaan adigana aadan ka joogsanayn . iyo in aad ku taageerto wax aadan doonay in aad samayso waxaas oo dhan waxa ay sheegayaan qofka oo aan ka run sheegayn aragtidiisa waxa ayna taa muujinaysaa qofkaa inuu daacad ahayn.
Waxaad aragtay qof ku dhahay ” waxaan aad u taageeraa fanaanad hebel , waa innan ( gabar) aad u cod macaan oo waliba si cajiib ah u taqaana qoob ka cayaarka ( dheesha taqaan) ” .
isla qofkaa hadii aad waydiiso su aa’ ah
” Ma jeclaan lahayd inantaa oo kale in ay walaashaa noqoto oo ay sidaa u cod macaanaato oo iyada oo aan asturnayn meelaha laga daawado ? ”
kadibna waxaan hubaa jawaabta uu ku siin doono qofkaa .
Hadii uu yahay ruux caro dhow markiiba waad is gelaysaan hadiise uusan kula dagaalin wuu ku aflagaadayn doonaa ( caayi doonaa ) waayo waxuu leeyahy
” maxaad gabadha walaashayda ah ugu matalaysaa waxa xun ” .
kadibna hadii aad waydiisu
” soo adiga ma aadan dhihin waan taageeraa waan jeclahay qaabkeeda . hadaba maxaa kaa caraysiiyaay marki walaashaa ay badalkeedu gashay ?
Waxuu kuugu jawaabi doonaa
” walaasheey lama mid ahan lamana doonayo in ay sidaa noqoto ”
Ugu dambayn hadii aad hadalkayga shaki ka qabtaan waxaad isla su’ aashaan waydiisaa Adiga naftaada amaba cid aad aad isleedahay fanaan hebel ayuu taageeraa kadibna waxaa kuu soo bixi doonta jawaabta aan kuu sii sheegay .
balse waxaan ka afeefanayaa tusaale in ay tahaya arintan waxaana usoo qaatay sida aan anigu u dareemayo waayo aniga innan walaashayda ah xumaan lama doonayo sidaa awgeed dhammaan hablaha islaamka ah qaas ahaan hablaha soomaaliyeed waxaan uga damqaayaa ( uga xanuunsanayaa ) si lamid ah sidaan uga damqanayo inanta iladhalatay . waxaan jeclahay sida aan uga ilaalinayo xumaanta innanta ila dhalatay in aan xumaanta uga dhowro dhamaan hablaheena qaaliga ah .
Run ahaantii macno iima samaynayso hadii aan walaashayda xumaan ka dhowro kuwa kalana aan la doonto xumaanta.
waayo ninka ragga ah waa ninka dummarka oo idil iyo kuwa ku heeraaraba ceebtooda astura oo aan meel uga dhicin sharaftooda .
sidaa si lamid ah ayaan rajaynayaa dhalinyarada dhamaantood in ay sameeyaan .
Waxaan aad u codsanayaa in aan is’ waafajino waxa aan nafteena la doonayno iyo waxa dadka kale aan la jecelnahay.
¤ – Waa in aad iska ilaalisaa ( ka taxadartaa) in aad samayso arin aad dareemayso caqli ahaan in ay khalad tahay kadibna ay kugu kalifi karto in aad been sheegto amaba kugu qasabta in aad arintaa khariso . Tusaale ahaan
¤ Hadii aad xatooyo samayso haba ahaato mid lagaaga tagtay iyo mid aan lagaaga taganba ama in aad samayso ficil xun oo dambi ah oo aadan doonayn dadka in ay kugu ogaadaan. marka koowaad Caqligaagu waxuu dareemayaa ficilkaa samayntiisa inuu yahay mid kahlad ah . Marka labaad waxaad isku dayaysaa in aad qariso ficilki xumaa ee aad samaysay waliba waxaa dhici karta in aad been sheegto adigoo is’ difaacaya .
Hadaba waxaa wanaagsan wax waliba oo aan samaynayno in aan marka horeba ka fikirno ma arin ka hor imaanaysa shareecada islaamka mise waa arin aan ka horimaanayn ? .
Waxaan hubaa hadii aad wax waliba sidaan ku qiimaysato ka hor inta aadan ku dhaqaaqin in aysan kasoo bixi doonin wax sharaftaada dhaawaca amaba kugu kalifa in aad qariso oo aad been sheegto .
# Intaa iyo in ka badan waxa ay caqabad ku noqdaan qofku inuu ahaado ruux daacad ah , sidaa awgeed waa in aan ka taxadarno waxa aan ku hadlayno iyo waxa aan qabanayno iyo waxa aan ku fikirayno intaba .
3- Waa in aad noqotaa qof Geesi ah ( aan biqin ) .
¤ – Geesinimadu ma ahan qofku inuu ka qaybqaato dagaalka oo kaliya balse waa in qofku hadii uu khalad ka dhaco uu qirtaa kana raali geliyaa cidii uu qaladka ka galayna ,
¤-Hadii qofka laga caraysiiyana caradiisa waa in uu xakamayn karaa. waayo qofka wax uu xakameeyo waxaa ugu adag caradiisa ( xanaaqa ) . hadii aad ka adkaato caradaada ogoow waxaad tahay ruux geesi ah oo awood badan.
¤-Geesinmadu waxaa kamid ah qofka oo ruuxi ku xad gudbay iska cafiya asgoo ka aar gudan kara .
¤- Geesinimadu waa in ruuxu uusan ka baqin xaqa iyo sheegistiisa , waa in aadan ukala eexan kan dad kuu xiga iyo kan aan kuu xiginba .
¤- Geesinimadu waa in aad dulmiga iyo dadka oo la xaqiro aad ka hor imaan kartaa adigoon cidna ka baqayn.
4- Waa in aad Noqotaa Qof Xushmad Badan ( ixtiraam badan ).
# Ugu horrayn erayga ixtiraam amaba xushmad waa eray macno badan samayn kara sida loo qeexayana dadku way ku kala aragti duwan yihiin balse hadii aan aniga isku dayo aragtidayda ku aadan erayga xushmad amaba ixtiraam waxa aan ku cabiray sidan
” Ixtiraamku waa in aad dadka kula dhaqantaa habdhaqan wanaagsan oo laga dareemayo dareen naxariis iyo qadarin iyo in aad wanaajiso fikirkaaga ku aadan dadka kale ”
waxaan isku dayayaa ( tijaabinayaa ) dhowr qodob oo muhiim ah in aan soo qaato iyo in aan qeexo qodobadaasi waxa aan ula jeedo si ay idiinkugu sahlanaato in aad fahantaa ulajeedka ka dambeeya .
A – in aad qofka ku qadariso muuqaalkiisa oo aadan waxba ka sheegin .
ugu horraayn bini aadamka oo idil Allah ayaa abuuray ee iyagu isma aysan dooran qaabka ay u muuq ekaanayaan hadaba waa in aadan qofna ku dhibaatayn qaabka uu alle u abuuray . Waa in aan xasuusanaa alle addoomadiisa kuma qiimeeyo qurux ama qurux daro , taajirnimo ama faqiirnimo, balse waxa uu ku qiimeeyaa hadba sida ay ukala cabsi iyo cibaado badanyihiin .
Allah waxuu quraanka kariimka ah ku leeyahay ” Alle aktiisa waxaa ugu karaamo badan ( sharaf badan ) kuwa alle ka baqa . ”
¤- Marka koowaad ogoow alle abuuristiisa cidna laguma ceebeeyo oo waa dambi .
¤-Mida labaad waxaad ku xad gudubtay qofkii hadii aad muuqaalkiisa wax ka sheegtay oo waxaad dhaawacday sharaftiisa iyaduna waa dambi ruux in aad aflagaadeeyso .
¤-Tan sedexaad qofki aad aflagaadeeysay hadi uu awood uleeyahay inuu ku dhibaateeyo waxaa dhici karta inuu ku dhibaateeyo amaba inuu adna ku caayo . hadiise uu awoodin niyada ayuu kaa habaarayaa amaba xariir hadii uu idin ka dhexeeyay waxaa la arkaa inuu xumaado.
B- Xushmeey Qofka Fikradiisa.
¤ Hadii qofka aragtidiisu aysan ahayn mid ka hor imaanaysa shareecada islaamka , ma banaana in aad ku dhaleecayso , waayo bini aadamku isku caqli ma ahan isku sinna wax umawada arko , waxaa dhici karta wax adiga kula wanaagsan inuu qofka kale u arko sidaad u aragtay si’ ka’duwan hadaba waa in aad xushmeeysaa qofka aragtidiisa hadi ay ku cajabisay iyo hadii kaleba .
Muhiimadu ma ahan in aad ka qaadato aragtida qofka kale balse waa in aad ka dhagaysato si’ adigana uu kaaga dhagaysto aragtidaada . Waxaadna ogaataa qofka oo aad ku xushmeeyso aragtidiisa waxa ay suurtagalisaa in aad qofkaa isku soo dhawaataan oo aad meel dhexe iskuugu timaadaan amaba in aad isla qaadataan hal aragti oo la isla ogol yahay.
C- Xushmeey qofka wax qabadkiisa :
¤ Waxaa wanaagsan qof waliba in aan ku qadarino hawsha wanaagsan ee uu qofku qabtay waa hadii aysan ahayn mid ka hor imaanaysa shareecada islaamka .
Waa in aanan xasdin amaba aadan xaqirin , waxaa haboon in aad uga mahadceliso hadii uu shaqo wanaagsan qabtay haba ahaato mid yar oo aan dhamaystirnayn balse ku qadari isku dayga shaqada wanaagsan si adiguna uu kuu qadariyo.
D- Waa in aad tixgelin sii saa dadka iyo nidaamka ay dagsadaan :
¤ – Hadii aad u timaado dad qaanuun meel wada dhigtay waa in aadan ku xad gudbin amaba aadan dacaayadeen , hadeey noqon lahayd nidaamada amaba qaanuunada ay dowladaha amaba iskuulada ama meelaha dadku kukulmo ama dhaqamada dadka ay gaarka u leeyihiin .
” Muhiimadu waa in aadan ku xad gudbin hadii aad qof ama dad heshiis lagashay macnahu waa in aadan ka bixin heshiiska waayo heshiiska oo aad burisaa ( jabisaa) waxaa kaaga imaan karta dadkii aad kaga baxday heshiiska in aysan ku xushmayn oo ay kuu arkaan ruux beenaale ah.
Hadii aad timaado meel nidaam ka jira oo dad wax ku heshiiyay , waa in aadan nidaamkaa carqaladeen amaba aadan ka hor imaan , waxaa wanaagsan nidaamka hadii uusan ahayn mid shareecada islaamka ah ka horimaanaya in aad tixgeliso si adigana dadkii nidaamka dajistay ay kuu qadariyaan kuuna xushmeeyaan.
Waxaan jeclahay in aan soo qaato Tusaale yar oo ku saabsan hadii qofku uu jabiyo nidaam dadka wada dhigtay waxa ka soo gaari kara , waxaan soo qaadanayaa tusaale yar oo ay fahmi karaan dhalinyarada kubada cayaarta amaba wax ka taqaan ( garanaysa) .
¤ – Marmarka qaar waxaa dhacda marki ay dhalinyaradu kubbad ku cayaarta xaafadaha inuu mid dhalinyarada kamid ahi uu soo daaho kadibna uu yimaado kubadi oo socota islamarkaana uu isku dayo inuu helo meel uu ka galo cayaarta si uu u cayaaro nasiib daro hadii uu waayay amaba u suuroobi waydo inuu cayaarta ka qayb galo waxaa dhacda in uu caroodo kadibna caradiisi ay sabab unoqoto cayaartii dhamaanteen isaga daraadii in ay u joogsato amaba ay u baaqato .
Sidaana waxaa lamid ah cid kasta oo isku dayda in ay carqaladeeyso nidaam dad ay ku heshiiyeen .
Hadaba qofkaa sidaa sameeya amaba dhaqankiisu sidaa yahay maxay dhalinyaradu ka yiraahdaan ma nin ay jecelyihiinbaa oo ay xushmeeyaan mise waa qof maqnaashihiisa lagu farxo ?
hadaba waa in aan ogaano qodax qofkii abuurtaa qodax un baa u soo baxda . waa in aan anaga sameeynaa wanaaga si dadku wanaaga ay inoogula’ dhaqmaan .
E-Noqo qof ilaaliya wakhtiga Balanta :
Run ahaantii marmarka qaar waxadba maqlaysaa maahmaahyo si qaas ah loogu sameeyay qaarada aan ka soo jeedno taasoo ah
” Afrikaanku balan ma laha ” taasina waa mid xaqiiqda ka fog , dadku mawada sinna hadii cid qalad gashayna looma baahnayn ummada oo dhan in magaca looga cayaaro . qaas ahaan ummada islaamka ah ee ku nool qaarada afrika , sababata aan sidaa uleeyahayna waxa ay tahay Diinteena islaamka ma ogola balan ka baxyo , hadii qofku uu ku dhaco dambigaana waa in uu ka towbad keenaa sidaa awgeed dadku ogaal uma galaan ee inta badan aqoon daro ayaa sabab u ah iyo qofki oo aan aqoon siduu ula dhaqmayo hadii xiliga balanta waxkale ay ku soo baxaan . hadaba waxaan jeclahay talooyin yar yar oo ku saabsan arintaa in aan idiin la qaybsado.
# Marka koowaad hadii aad awoodi waydo balanti in aad kaga soo baxdo waqtigeedii amaba hadii ay kulan ahayd oo aadan soo xaadiri karin sababa jira awgeed waa in aad samaysaa xaaladahaan soo socda
A – Ugu horrayn isku’ day in aad Alle dambi dhaaf waydiisato waayo Allaah waxuu quraankiisa ku leeyahay
” kuwa iimaanka laga helayoow ( caqiida islaamka lahoow ) oo fiya balamada” .
Hadiise ay dhacdo in ay arin ku qabsatooo aad awoodi waydo in aad balantaa oofido isku day in aad qofkii la soo xiriirto kahor inta aan lagaarin xiliga balanta una sheegto sababta dhabta ah ee kugu kaliftay in aadan oofin karin balantaa .
# Hadaba marki aad sidaa sameeyso waxaad ka faa iiday dhowr shay oo muhiim ah waxa ayna kala yihiin :
1 -Marka koowaad waxaad qofkii u dhowrtay waqtigii uu adiga ku sugi lahaa oo kama aadan luminin waqtigiisii.
2- Marka xigta hadii rajo uu kaa lahaa waxaad u fududeeysay meelo kale inuu wax ka raadsado.
3- Marka saddexaad waxaad iskuugu muujisay in aad tahay ruux waqtiga dhowra waxaadna ka kasbatay kalsooni ah in uu markale waqti kuu qabto amaba uu kaa aqbalo hadii aad waqti kale u qabato . waayo qofku waxa uu dareemayaa in aad tahay ruux ay la wayn tahay in uu oofiyo balanta balse dan ay qabsatay .
# Marka labaad hadii ay kuu suurta gali waydo in aad soo xiriiriso ( xidhiidhiso) Cidii aad balanta lagashay ka hor inta aan lagaarin xiliga balanta , waxaa wanaagsan in aad sidaan sameeyso
A . Waa in aad baadi goobtaa ( raadisaa ) cidii aad balanta uga baxda kadibna aad isku daydaa in aad u sheegto sida runta ah ee kugu kaliftay in aad soo xaadiri waydo balanta amaba aad ka soo bixi wayday wixii lagaa sugayay. Taasina waxa ay keeni kartaa qofku inuu kaa dhagaysto cudurdaarki aad ula timid .
B- Marnaba ha isku dayin cid kale in aad eeda dusha ka saarto , waa in aad aqbashaa in aad adiga khaladka samaysan . waayo dadka qaarkii waxa ay isku dayaan cid kale in ay u sababeyaan amaba ay qiil uga raadiyaan qof hebel ayaa sidaa igu yiri ee waan iman lahaa yo wax lamid ah
waxaa haboon in aad dhahdo
” Waxaan aad uga xumahay in aanan balantii ka soo bixi waayay , , waxaan dareemayaa in aan wax xun sameeyay, waxaana rajaynayaa in aad iska kay cafido ( cafiso) iwm . ”
isku day in aad qofka u muujiso in aad ka xuntahay wixii dhacay oo aadan umuujiso mar kale in aysan dhicidoonin.
C- Khaladka ugu wayn ee dadku ay sameeyaan waxa uu yahay waxa ay isku dayaan marki ay raaligelin bixinayaan in ay sababeeyaan . waana arinta keenta qofku inuusan kaa dhagaysan amaba uusan kaa aqbalin raaligelinta .
Hadaba waxaad ogaatan hadii aad bixinayso raaligelin oo ay ku jirto erayga ” Laakiin ” ( Hase yeeshee ) inta badan looma fasirto raali galin balse waxay dadku qiimeeyaan waxa ka dambeeya erayga ” Laakiin ” waa in aad ka foojignaataa amaba iska daysaa isticmaalka erayga ‘ Laakin ” qaas ahaan xiliga raaligalinta, hadiise ay dhacdo in aad is ticmaashana waa in aad ka gadaal marisaa wax tilmaamaya in aad ka xuntahay wixii dhacay . Tusaale ahaan
” Waan jeclaa in aan balanta oofiyo laakiin ( hase ahaatee ) waan khaldamay waana ka xumahay . ”
Marka koowaad waxaad u muujisay in aad doonaysay in aad balanta oo fidio ( oofiso) , Marka xiga waxaad qiratay in aad khalad samaysay oo waliba aad ka xuntahay . ,
Balse waxaa dhacda dadka qaarkii in ay si kale u isticmaalaan erayga ‘ Laakin ” taasoo sabab unoqon karta qofki aad raali galinaysay inuu macno kale u samayso raaligalintaada . tusaale yar
” Waan jeclaa in aan balanta oofiyo hasa ahaatee ( Laakiin ) waan daalnaa ”
” waan jeclaa in aan balanta oo fiyo laakiin mashquul ayaan ahaa ”
Qofka markuu sidaan u hadlo waxaa lagala soo bixi karaa inuu ku qanacsanaa marki uu samaynayay balan kabaxyada . waayo Jumlada hore ee raali gelinta ah wax micno ah masameeynayso hadii Jumlada ka dambeeysay erayga ” Laakin” aysan ahayn mid tilmaamaysa in aad qirsan tahay in aad khaldan tahay waliba aad ka xun tahay wixii dhacay.
# Mowduuca raali gelinta aad ayuu u baalaran yahay balse aan intaan ku soo koobo .
5-Waa in aadan noqon qof baryo badan ( baryada bani’ aadamka ) .
¤ -Bani’aadamka oo aad ka kaaftoontu waxa ay kuu qaadayaan xushmad iyo qadarin hadiise aad mar waliba u baahato gacantiisa waxaa dhici karta inuu adna kuu arko ruux liita oo aan waxba ahayn. xitaa waxaa dhici karta inuu marmarka qaar kuu go’aamiyo waxa aad qabanaysid iyo sida aad u qabanaysid waayo waxa uu dareemayaa in aadan ka hor imaan karin waana arin dhibkeeda leh
¤ – Hadaba waxaa wanaagan in aad noqoto ruux wax soo saar leh amaba isku day samayn kara waayo in aad guulaysato iyo in aad guul daraysataba waxay ku jirtaa gacanta Alle
Hadaba cidna ha u’ ogolaan in aad meel u fadhido oo aad gacantooda sugto hadii ay quud ahaan lahayd iyo hadii ay cilmi ahaan lahayd iyo hadii farsamo ahaan lahaydba , Waa in aad la timaadaa isku day inshaa allah. Alle ayaa kula garab galaya balse marnaba haku qancin meel fadhi anigaa iwaydii waxaad doonto.
Teeda kale Qofka islaamka ah waa qof firfircoon oo wax soo saar leh oo maskax shaqaynaysa leh hadaba ogoow adna qofkaas ayaad tahay ma ahan in aad isliido ( is yasto) , ma jirto qof qofka kale ka sareeysa balse waxaa jirta in lakala’ dadaal badan yahay ee yaana lagaa dadaal badnaan oo kadibna yaana lagugu qancin waxba ma qaban kartid . waa in aad kor ugu sheegtaa in aad wax waliba noqon karto isbadalna aad samayn karto . insha allah waad guulaysanaysaa.
Waxaa jirta maah maah Shiinees ah (chinese) oo leh
” Qof in aad siiso kalluun si’ uu hal maalin quud uga dhigto , waxaa ka wanaagsan qofka in aad barto siduu u kalluumaysan lahaa waayo waxa aad quudisay noolashiisa oo dhan ”
sidaa awgeed bini aadam in aad wax ka sugtaa wax qurux badan ma ahan waxaanse Allah
waydiisano inuu naga dhigo kuwa ka’ kaaftooma gacan bini aadam . Aamiin .
Ugu dambayntii Alle hanaga dhigo ku waanada wax ku qaata.
Intaan saxay Allah cayaa i waafajiyaay intii aan khaldayna shaydaan xagiisa ayay ka ahaatay.
Fadlan usii gudbi walaalahaaga kale .
Qoraaga: Maxamed Cabdi Jaamac